Dhalasho Wacan Heesaa Shreya Ghoshal Iyo 10-keeda Hees Ugu Wanaagsan Bollywood Iyo Koonfurba (+Video) – Filimside.net
Dhalasho Wacan Heesaa Shreya Ghoshal Iyo 10-keeda Hees Ugu Wanaagsan Bollywood Iyo Koonfurba (+Video)
Maanta waxaa loo dabaal dagayaa sanad guurad dhalasho fanaanada ama heesayada weyn ee Shreya Ghoshal taaso jirsatay 35 sano waxay dhalatay maanta oo kale 12 Maarso sanadkii 1984 waana 35 jir.
Shreya waa mid kamid ah heesayaasha taariikh ahaan dalka India kasoo jeeda kuwooda ugu codka macaaan dad badan ayeena codkeeda halaasiga ah kaga ilmeysiisay qalbigana kaga xaday.
iyadoo 4 jir ah ayee bilaawday inee heesto sido kale markee 6 jir noqotay ayee tartanka iyo tababarka dhanka heesaha iyo fanaanimada ku biirtay heeskeedi ugu horeyay waxuu ahaa Sa Re Ga Ma Pa kaaso Tv ay kaga heestay.
16 markee ahed ayee Bollywoodka soo gashay oo ay bilaawday inee ka heesto filmkii Sanjay Leela Bhansali e Devdas ayeena 3 hees ka qaaday waxayna hanatay quluubta reer hindiya sedexdaas hees waxay ku hanatay abaal marint National Film Awards iyo 2 Filmfare Awards ah fanaanad sanadka ayeena noqotay.
Wixii markaas ka dambeyay dib uma aysan soo jeedsan abaal marino iyo bandhigyo waweyn ayee sameeysay atiriishooyinka ay heesaheeda ugu wanaagsan u qaaday waxaa kamid ah Aishwarya Rai, Madhuri Dixti, Rani Mukerji, Anushka Sharma iyo kuwa kale oo badan.
Hadaba munaasabada dhalasho xidigtaan waxaa lasoo bandhigay 10-eeda hees ugu wanaagsan dhamaan heesaha ay ku luuqeysay fadlan halkaan hoose ka daawo iyagoo muuqaal ahaan ah..
Bairi Piya – Devdas
Sunn Raha Hai Na Tu -Rozana Mashup – T-series Mixtape
Deewani Mastaani Unplugged – Bajirao Mastaani
Mannipaaya – Vinnaithaandi Varuvaayaa
Nuvvem Maaya Chesavo – Okkadu
Jeev Rangala – Jogwa
Aatach Baya Ka Baavarla – Sairat
Waxaa Aqrisay 305